Umshini we-diesel pellet owenza umshini wokuthengisa okushibhile we-pellet mill wenza ama-feed pellet
Usayizi wokugcina we-pellet:2~ 8mm
Isetshenziselwa:Ukwenza inkukhu,idada,unogwaja,imbuzi,ukudla kwezinkomo
Ama-Raw material:Ukolweni, ushukela kakolweni njll kanye nemfucuza echotshoziwe evela kwezolimo
Umshini we-diesel pellet owenza umshini wamukela ukwakheka kwesakhiwo sefulethi,okuwumshini omuhle wokwenza ama-pellet kubantu abafuna ukonga izindleko ekwenzeni ama-feed pellets noma abanakho ukufinyelela okulula kugesi lapho bekhiqiza khona ama-pellets, Ngokwesibonelo, emapulazini abo. Le mishini yedizili yedizili iyathengiswa hot for pellets eyenziwe ekhaya. Ubukhulu bawo amancane nenjini yedizili kuyenza ihambeke futhi ilungele kakhulu ukuzulazula. Izingxenye ezibalulekile zomshini kufa okucaba ne-pellet roller. Ngenkathi enza izinto ezithile, izinto zokupheka ezilungiselelwe kahle ziwela endaweni ephakathi kwe-pellet die kanye ne-roller. Lapho-ke ingcindezi ephakathi kofayo nogingqa izocindezela izinto zokwakha ngokusebenzisa izimbobo ezisefeni. Ngemuva kwalokho, ngakolunye uhlangothi lwe-flat die, ama-pellets we-density feed azokhiqizwa futhi anqunywe kubude bangaphambi kokunqunywa abese ewela umshini wokugaya we-pellet.
Kungani sikhetha umshini wokwenza udizili ?
Okokuqala nje ,le mishini yedizili yedizili iyakwazi ukwenza ama-pellets okondlayo ngezinto ezahlukahlukene zokusetshenziswa: utshani bokusanhlamvu, amadlelo, utshani bommbila, ilayisi, ubhontshisi, igobolondo lamantongomane,izinsalela zezolimo nokungcola kwehlathi njll.
Okwesibili, ingaxazulula inkinga yakho yokuntuleka kukagesi ngenkathi igcina ukukhiqiza okufanayo. Akuzona zonke izindawo ezikwazi ukuthola ugesi, ikakhulukazi emasimini noma emapulazini asemakhaya. Kepha lokhu kuphazamiseka ngeke kusivimbele ekukhiqizeni ama-pellets feed .Lo ​​mshini wokwakha i-pellet uqhutshwa yinjini yedizili futhi kuyisinqumo esihle endaweni lapho ugesi ungatholakali khona lapho, kuyabiza, ayitholakali noma ayilula ukuyisebenzisa.
Okwesithathu,Lo mshini uyakwazi ukucindezela ama-pellets okuphakelayo ngama-diameter ahlukahlukene (imvamisa ukusuka ku-2mm kuye ku-8mm) nobude ngamamodeli ahlukene wobubanzi be-pore nobubanzi bokucindezelwa okuhlukahlukene. Izigayo eziguqulwe zashona eziguqulwe neziguqulwa zedizili zenziwa ngensimbi ephezulu ye-alloy, futhi impilo yabo yenkonzo okungenani iphelile 800 amahora.
Okwesine,njengamanye ama-mill die pellet mill, le mill ye-pellet nayo ijabulela izinzuzo zosayizi omncane,design elula,isakhiwo esihlangene, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, ukusebenza okulula, ukulungiswa okuncane, umsindo ophansi, nempilo yenkonzo ende.Umshini wokwenza udizili we-diesel unobukhulu obuhlanganisiwe, ngakho-ke ungabeka nomaphi lapho udinga khona.Angabizi kakhulu, ngoba isebenzisa uwoyela ophansi wedizili.
Izici zedizili pellet
1.Umshini we-pellet womshini we-VICTOR, inqubo yokukhiqiza emshinini ngokwayo ngaphansi kwengcindezi yokwenza ama-feed pellet, ilungele ukufuya ingulube, izinkomo, imvu, namagundane okuququda, ukuthuthukiswa kokutholwa kokuphakelayo, khulisa ukudliwa kwezilwane.
2.Diesel pellet mill ukwenza lula ukondla, ukusetshenziswa okuphezulu, Kulula ukulawula inani lokudla, ukondla okuphakelayo, ihlanzekile futhi ihlanzekile.
3.Idiesel feed pellet yokwenza umshini ukwenza inqubo yokwenziwa kwezinhlayiya inika amandla okusanhlamvu, legume trypsin boycott factor degeneration, yehlisa imiphumela emibi ekugayweni, ingabulala amaqanda we-parasite kanye nezinye izinto ezincane ze-pathogenic, ukunciphisa izinhlobonhlobo zezifo eziyizigaxa kanye nezifo zesistimu yokugaya ukudla.
Amapharamitha wezobuchwepheshe weDiesel Pellet Mill
Ividiyo esebenzayo yamaphayini we-feed pellet